Ny anjara-toerantsika Kristiana eto amin’ity izao tontolo izao ity.
Asan'ny Apostoly 1:8 « Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. »
Salamo 119:126 « Efa andro tokony hampisehoan'i Jehovah ny heriny* izao; Fa nandika ny lalànao ny olona. [Heb. hiasan'i Jehovah]. »
Kolosiana 1:24-27 « Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany, dia ny fiangonana*, [*Gr. eklesia] izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomena ahy ho anareo, hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, dia ny zava-miafina, ilay voàfina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina ; izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren'ny voninahitr'ity zava-niafina ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy ao anatinareo, Izay fanantenana ny voninahitra; »
A.- Vanin’andro sarotra
Izao vanin’andro iainantsika izao ry havana dia tena mitovy tamin’ny andron’ny Elia mpaminany, ao amin’ny 1Mpanjaka 18 :21 « Ary dia nankeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hœ: Mandra-pahoviana no hiroa saina ianareo ? Raha Jehovah no Andriamanitra, manaraha Azy; fa raha Bala kosa, dia manaraha azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. » 1 Mpanjaka 18: 27 «Ary nony nitataovovonana ny andro, dia nanesœso azy Elia ka nanao hœ: Miantsoa mafy ihany, fa andriamanitra izy; angamba sondrian-dresaka izy, na miavela, na nisy nalehany, na matory angaha izy ka tsy maintsy hofohazina. »
Inty tantara ao amin’ny 1 Mpanjaka inty dia fotoana nisian’ny tena fahasahiranam-be na “crise “ teo amin’ny zanak’Isarely satria nisy mosary tamin’izany fotoana izany. Na dia nisy mpivavaka sy mpaminany aza tao dia nandalovana fotoan-tsarotra mihintsy ny zanak’Israely, ary tao anatin’izany fahasahiranam-be izany mihintsy no niantson’Andriamanitra an’i Elia mpaminany, ka nahatonga an’i Elia nilaza tao amin’ny 1Mpanjaka 18 :21 izay miroaroa saina.
Toe-panahy toy izao no hita tamin’izanny niroaroa saina ny olona, tsy hitan’ny olona intsony izay hianteherana, tsy hitan’ny olona intsony izay hivavahana, ary na dia ny zanak’Israely aza nisalasala ny amin’izany ANDRIAMANITRA izany, hoe raha misy ve izao ANDRIAMANITRA izao, nahoana no misy mosary ? nahoana no misy ohatra izao ?
Rehefa tena nitranga izao zavatra izao, niseho amin’izay Elia, ary niseho izy teto amin’ izao tontolo izao ka nanao hoe : mandra-pahoviana no mbola hampisalasala anareo amin’izao vanin’andro izao ?
Nahafinaritra mihintsy no nandika an’io Tenin’Andriamanitra io satria nanao « défi » mihintsy Elia, raha manaraka tsara isika, ny mpaminanin’i Bala 150 ary ny mpaminanin’i Aserah 400, Elia irery no hifanandrina aminy, ao anatin’ny fotoan-tsarotra.
Androany aho tena hiresaka aminao mihintsy izay milaza ny tenantsika tena fa ho mpino isika androany, fa misy zavatra andrasan’ ANDRIAMANITRA amintsika mihintsy, amin’ny fotoana sarotra tahaka izao, izay nitovitovy tamin’ny zavatra nitranga tamin’ny andron’i Elia.
Fa tamin’izany fotoana izany ny mpaminanin’i Bala dia mampitahotra, ny mpaminanin’i Aserah misehoseho amin’izay tena tsy tokony hanaovana azy. Izany hoe tena nanao « démonstration » mihintsy ny devoly tamin’izany fotoana izany, nampiseho ny heriny ny devoly.
Fa teo anatrehan’izany dia nitsangana i Elia ka niresaka tamin’ireo vahoaka ireo izy : mandra-pahoviana no mbola hiroaroa saina ianareo? Izany no nambarany, ary nahafinaritra ahy ny teniny teo amin’ny 1 Mpanjaka 18:24 « Ary miantsoa ny anaran'ny andriamanitrareo ianareo, ary izaho kosa hiantso ny anaran'i Jehovah; koa Izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka Izy no ho Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hœ: Marina izany teny izany. »
Ny lesona tiana apetraka amintsika eto dia izao :
Hatao ahoana no mbola hahafahana hijoro vavolombelona, amin’izao fotoana efa feno ota, feno fakam-panahy, fotoana tena ratsy raha izao vanin’androntsika izao ; « corruption », ny fijangajangana mahatsiravina?
Rehefa mandray olona izahay ry havana amin’ireny toerana alehanay ireny dia izany daholo no « problème », mikorontana ny fiainana ; ohatra ny hoe tsy misy kristianina izany eto amin’ity firenena ity, ohatra ny hoe tsy misy mpino izany.
Fotoana hitadiavan’Andriamanitra olona, tena mpino izao fa tsy kristianina . Jereo fa Elia irery no nanoloana ireo olona 550 izay nanaovany « défi ». Ary io indrindra no tena apetraka amintsika fa amin’izao vanin’andro iainantsika izao dia mitady olona afaka hanao “défi” amin’ny devoly Andriamanitra: Iza no tena sahy hanaporofo fa velona io Andriamanitsika io?
Ny devoly dia mihezaka ny hampatahotra antsika amin’ny endriny isan-karazany.
Ary izao vanin’andro izao tena fotoana indrindra ahazoantsika mamantatra ny tenantsika.
Fijoroana vavolombelona : Nanao karazana « expérience » izahay, ry havana, rehefa mandeha manao « tournée » io, fa lazaiko anareo izany hoe ity izao tontolo izao ity dia manaiky ny zanak’Andriamanitra.
Mangataka amin’ny Tompo izahay rehefa mandeha manao “tournée” fa irahany ny anjeliny mialoha lalana anay. Tsy misy sahy manakana mihintsy ry havana any amin’izay toerana alehanay. Tonga tsara amin’ny ora ara-dalana, jerena anefa izay mandeha, sakanana, sakanana. Misy sasany izany efa mitady hanakana, mitodika indray.
Tena porofoinay mihintsy fa velona i Jesosy izay miaraka aminay ry havana.
Fotoana tokony hampisehoan’Andriamanitra ny heriny izao ry havana .
Salamo 119:126 « Efa andro tokony hampisehoan'i Jehovah ny heriny* izao; Fa nandika ny lalànao ny olona. [Heb. hiasan'i Jehovah] »
Nolazain’i Jesosy ao amin’ny Asan'ny Apostoly 1:8« Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. »
Efa mipetraka eto Madagasikara ny fiangonan’i satana na “église du diable”. Ary dia manjakazaka amin’ny vola, amin’ny fampitahorana, amin’ny zavatra maro isan-karazany.
Dia aiza ny fiangonan’Andriamanitra na Eglise de Dieu”? Andro tokony hampisehoan’i Jehovah ny heriny izao ; ho vavolombeloko ianareo.
Mahita kristianina izany aho manaraka fotoam-bavaka toy izao; fa misy betsaka ry havana, milaza fa tsy tena nahita an’i Jesosy hono izy raha tsy tary; kanefa dia nanaraka teo foana izy ireo.
Izaho dia tsy variana mihintsy mahita olona be dia be tahaka izao mivavaka ; ohatra ny mivavaka izany nefa tsy mivavaka.
Asehon’Andriamanitra ny heriny, anaovan’ Andriamanitra « triage » na fisivanana izao fotoana iainantsika izao.
Jereo tsara tamin’ny andron’i Elia ry havana, nisy ny mosary. Ary amin’izao vanin’andro izao dia mihasarotra sy mikaikaika ny olona maro.
Tsy azo antoka intsony ilay fivavahana fa aleon’ny olona mandeha any amin’ny fanompoan-tsampy na mamonjy zavatra maro isan-karazany, eny fa na dia ao anatin’ny fianakaviantsika aza.
Ao anatin’ny tokatranontsika ao dia miroaroa saina ny olona mahita fa mba mivavaka ihany ireto olona ireto, kanefa rehefa misy fahasahiranana na aretina ao dia
- Nahoana no miantehitra amin’ity zao tontolo izao ity ?
- Aiza ilay Andriamanitra hivavahana ?
- Ataonao ahoana no handresy lahatra ny fianakavianao? ataonao ahoana no handresy lahatra an’ity izao tontolo izao ity ; na dia isika mpivavaka aza tsy sahy manaporofo ny herin’Andriamanitra.
Fotoana tokony hampisehoana an’ Andriamanitra izao ry havana ; fa ahoana no ahazoana manantateraka izany?
Ny fanehoanao an’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao no tadiavin’Andriamanitra aminao amin’ izao no vanin’androntsika izao.
Ny antony nitenenan’Andriamanitra hoe tsy ampitoviako ny marina sy ny meloka dia te hanavaka anao IZY amin’ izao fotoan-tsarotra izao.
Fa maninona no tsy miavaka ianao?
- satria tsy marina!
- tsy nandray an’i JESOSY ilay Fahamarinana ianao.
Mitady olona tena sahy hijoro hoe “izay Andriamanitra mamaly vavaka amin’ny afo, aoka ho IZY no ho ekentsika.”
Isika ireto dia :
- manana fianakaviana mbola tsy niova fo.
- mivelona amin’ny vanin’andro izay tena mampirongatra ny devoly.
Ao anatin’izany zava-misy izany no hilaina antsika.
Miteny mivantana aminao izay mihaino sy manaraka izao toriteny izao aho androany:
- jereo tsara ny fiainam-panahinao: sao dia tsy tafiditra amin’ny kilasin’ny finoana ianao ka ho tavela eo raha ho avy ny Tompo, ary tsy vitan’izany ihany, fa ho any amin’ny helo ianao.
- Aza hamaivanina mihintsy ny fiainam-panahy,
- mba hahafahanao mijery tsara manoloana izao fotoan-tsarotra izao raha mbola afaka ve aho manaporofo fa velona io Andriamanitra io.
Fijoroana vavolombelona :Alina aho, somary tsy dia salama mihintsy aho fa angamba vizana be, tsy fantatro. Tonga ny devoly izany nanao hoe : ianao angaha afaka hitory teny rahampitso ! Dia hoy aho hoe dia ho hitanao eo ry satana. Ny maraina aho mbola ohatra ny fanimpanina izany; fa tonga amin’izay ny Tenin’Andriamanitra hoe : mitsangana amin’izao herinao izao ! niaraka tamin’izay dia afaka daholo ilay faharerahana !
Fotoana tokony hanaporofoantsika izao :
- fa tsy tokony hisy ho voatazon’ny devoly intsony isika amin’izao vanin’andro izao.
- fa velona JESOSY, fotoana tokony hanehoantsika ny herin’Andriamanitra izao.
Ny devoly tena manao « course » sy « démonstrations » mihintsy amin’izao fotoana izao. Ary ampiasainy amin’izany ny « pouvoir satanique » hanaovany « démonstrations » amin’ny olona izay minomino fotsiny fa tsy tena mpino. Dia variana fa ato no misy Jesosy, ary no misy Andriamanitra.
Io devoly io amin’izao tena miasa amin’ny fomba maro samihafa ; aty tena azo antoka fa mahazo vola be, sns.
Fotoana tokony hahazoantsika mampiseho fa ity Jesosintsika ity dia manana fahefana ambony noho ny fahefana rehetra.
- Koa afaka maneho izany ve isika?
- Afaka miteny ve isika amin’izao fotoana izao hoe: mandrapahaoviana re no mbola hiroaroa saina ianareo e?
- Asehoy ry havana fa ity Jesosintsika ity mahavita ny zavatra rehetra, hoy ilay hira hoe hain’ny Tompon’ ny zavatra rehetra !
Tsy ho lava ny toriteniko androany fa te hampiditra anareo hoe aiza ho aiza no toerana misy antsika amin’ny maha-kristianina antsika, ho vavolombeloko ianareo.
B.- Inona no fanalahidin’izany?
Ity fiainana kristianina ity ry havana dia misy zava-miafina izay lazain’ny Soratra Masina fa nafenina, ary nomen’Andriamanitra antsika amin’izao vanin’andro izao.
Inona no zava-miafina?
Kristy ao anatinareo, izany no ahafahana maneho ny Herin’Andriamanitra ao anaty.
Kristy ao anaty , fa tsy hoe kristianina fotsiny.
Izany no tena fanalahidy : “omeko fahefana ianareo, hoy IZY, handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo”.
Fantatrao ve izany zo nomen’Andriamanitra anao izany ?
Fantatrao ve izany eo anivon’ity zao tontolo izao izay feno loto, feno fampitahorana ataon’ny devoly, feno fampahoriana ity?
Kristy hoy IZY ao anatinareo raha tsy olona nolavina ianareo; 2 Korintiana 13:5 « Diniho ny tenanareo, na mitœtra amin'ny finoana ianareo, na tsia; izahao tœtra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina ianareo ? »
Raha tsy olona nolavina ianareo, izany hoe olona ho any amin’ny fahaverezana ianareo raha vao tsy tonga saina tsara na« conscient » tsara amin’izao hafatra lazaina anao izao.
Androany, ry havana, afaka mampiseho an’zany ianao rehefa vita ity toriteny ity. Na aiza na aiza toerana alehanao, raha ao anatinareo marina Jesosy !
Ilay fahefana avo any an-danitra no mipetraka ao anatinao: hoy Izy hoe “efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; koa mandehana ianareo” ! Koa dia mandehana.
Hoy Jesosy hoe : “mandehana ianareo, indro AHO momba anareo mandrakariva.”
Dia mipetraka amin’izany Teny izany mihintsy fa raha tsy izany tsy mahavita asa. Tsy ny herinao no anavanao ny asa, tsy ny fahaizanao, tsy mahaela anao koa amin’ny fivavahana, fa JESOSY VELONA AO ANATY.
Te hitarika anareo amin’izay aho hoe fa ahoana marina tokoa?
Fa manao karazana fampisehoana mitovy amin’Andriamanitra satana amin’izao:
- rehefa manasitra ianao dia iny koa izy manasitra,
- rehefa manafaka olana ianao dia iny koa izy manafaka.
Fa inona no mampiavaka azy ?
Kristy ao anaty . Ilay Fanahy Masin’Andriamanitra rehefa miditra ao anatitsika dia mitondra antsika handeha amin’ny Fahamasinan’Andriamanitra .
Ny olona mampiseho ny Fahefan’ Andriamanitra dia
tsy maintsy mampiseho ny Toetran’ Andriamanitra ; izay tsy manam-pahamasinana tsy mba hahita ny Tompo.
Tsy maintsy mampiseho ilay vokatry ny fanahy izay voalaza Galatiana 5:22 « Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, » mampiseho ilay fitondran-tena madio, mendrika, ilay toetran’ Andriamanitra.
Izay ianao vao afaka mandresy lahatra sy mampiseho .
Diniho tsara ny fahefan’i Jesosy ao amin’i Marka 1 ;
- rehefa miteny JESOSY dia manana fahefana tsy tahaka ny an’ireo mpanora-dalana hoy izy ;
- rehefa mampianatra Jesosy dia manana fahefana, misy fahefana mampangovitra ny devoly.
Fijoroana vavolombelona : Tsy dia sahy miresaka amiko matetitetika mihintsy ireny olona mitondra devoly ireny, na ireny olona mihatsaravelatsihy ireny, matahotra, satria nahoana ? rehefa miteny aho, hoy aho hoe : rehefa miteny aho Tompo ataovy toy ny miteny ny teninao. Izany no notenin’ny Soratra Masina.
Ary ianao koa tian’ Andriamanitra hanao izany, mila olona Andriamanitra, sahy hoe rehefa miteny aho ataoko tahaka ny miteny ny tenin’ Andriamanitra .
Jereo tsara Jesosy, manana fahefana ny Teny rehetra izay aloaka ny vavany. Tsy azon’iza na iza sangisangina, tsy azon’iza na iza ampitahorina.
Raha andeha haka an’i Jesosy Jodasy sy ireo miaramila ary ireo mpiandry raharaha avy amin’ny lohan’ny mpisorona sy ny Fariseo, Dia hoy Jesosy tamin’izy ireo : iza no tadiavinareo? vao nilazatamin’izy ireo fotsiny Jesosy hoe “Izaho no Izy”, niaraka tamin’izay dia nikarapoka izy ireo.
Jaona 18:6 “ Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe: Izaho no Izy, dia nianotra ireo ka lavo tamin’ny tany.”
Izany no fahefan’io JESOSY io ao anatinao, ry havana. Ary tian’ Andriamanitra ho raisinao io fahefana io androany, ho ianao izay mihiaino izao toriteny izao.
Fa misy dingana tsy maintsy hataonao voalohany :
ampidiro ao anatinao aloha ilay Jesosy Tompon’ny fahefana .
Ny zavatra tadiavin’ Andriamanitra aminao dia ity teny ity :
1 Samoela 2:30 « Koa izany no anaovan'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, hœ: Efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny tarana-drainao no handeha eo anatrehako mandrakizay; fa ankehitriny kosa, hoy Jehovah, sanatria Ahy izany; fa izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra, ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka. »
Azonareo tsara ve izany ? inona izany fanomezam-boninahitra an’ Andriamanitra ?
- Ny fitondran-tena madio,
- Ny fitondran-tena mandeha amin’ny fatahorana an’ Andriamanitra
Ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia tsy zavatra ety ivelany na tsy resaka fitondrana baiboly.
Tamin’ny andron’ny Apostoly, vao namoaka devoly ny zanak’i Skeva dia hoy ilay devoly, fantatray Poly, fantatray Jesosy, fa ianao iza ?
Asan’ny Apostoly 19:13-15 “ Ary nisy Jiosy sasany, mpiriorio mamoaka fanahy ratsy, izay ninia nanonona ny anaran’i Jesosy Tompo koa teo ambonin’ny manana fanahy ratsy ka nanao hoe : Mampianiana anareo amin’i Jesosy Izay torian’i Paoly aho. Ary nisy fito mirahalahy, zanak’i Skeva, Jiosy, lohan’ny mpisorona, izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namaly la nanao taminy hoe : Fantatro Jesosy, ary fantatro koa Paoly; fa mba iza kosa moa hianareo?”
Fantatry ny devoly, ry Havana, raha misy Jesosy ao anatitsika ao na tsia.
Ny zavatra tadiavin’ Andriamanitra amintsika dia ny hanome voninahitra Azy !
Amin’ inona ?
- Tsy amin’ny « démonstration de force »,
- fa amin’ny fahamasinana aloha voalohany indrindra,
- amin’ny fitondran-tena madio sy mendrika
- amin’ny fihetsika, amin’ny fomba fiasa, omeo voninahitra IZY.
“Ary izay manamavo AHY dia ho afa-baraka”, ary io no tena sarotra fa tandremo tsara !
Be dia be amintsika no manamavo an’Andriamanitra amin’ny fomba fihetsika, amin’ny fomba fanao, amin’ny zavatra mitranga.
Fotoana izao, ry havana, tokony hanehoantsika hoe iza marina moa Jesosy Kristy ao anatintsika ao.
Tsara haverina fa ny fanomezam-boninahitra an’ Andriamanitra voalohany indrindra:
- aoka ny fitondran-tenanao ho mendrika ny filazantsara ;
- aoka hadio fitondran-tena ianao,
- hadio fisainana ianao,
- hadio eritreritra ianao.
Tsy mila resaka izany fa toe-panahy anaty, izay no voalohany indrindra.
Rehefa mipetra eo aminao izay dia tsy misy mahajanona eo aminao intsony ny devoly, ary misy aza fakam-panahy mandositra, betsaka mantsy ny fakam-panahy amin’izao fotoana zao .
Rehefa ny fakam-panahy no misarisary biby eo aminao izay dia mahimahina fa mety tazany fa tsy misy Jesosy ao zay. Rehefa izy no « tenter »-ny foana ianao isan’andro, mety indray, indroa mbola averiny.
Mitandrema tsara fa raha vao tena manolotena tsara ianao, vao mijery anao fotsiny ny masony, aza manatona an’io fa ratsy be io, ilay fanahy ao anatinao no tazany fa tsy ianao mihintsy akory !
Ary raha vao hitany ilay fanahy ao anatinao dia manjary manajanaja anao daholo ny olona rehetra, manjary mahita fitia amin’ olona ianao, tsy takatry ny sainao izany ; fa ilay fahamasinana no dingana.
Ny zavatra tadiavin’ Andriamanitra aminao ry havana, misy fepetra vitsivitsy ireto :
1) raha tianao ny mba hiteny hoe : “izay Andriamanitra mamaly amin’ny afo no aoka Izy no hivavahantsika” ; dikany izany izay Andriamanitra mamaly vavaka.
Raha mbola hatreto aloha dia mbola itovizana amin’ny devoly, satria izy koa manao « miracles en parallèle ».
2) fa ny tsy itovizana aminy dia izao : “izay tsy manam-pahamasinana ” ;
Mandeha amin’ny fahamasinana , io no fepetra voalohany indrindra ahazoana manome voninahitra an’ Andriamanitra ;
Ny atao hoe fahamasinana :
- fahadiovam-pitondran-tena na amin’ny takona na amin’ny miharihary,
- fahadiovana fisainana,
maro ny olona no manota an’eritreritra,
misy mijangajanga an’eritreritra,
misy mamono olona an’;
Izaho tsy mahalala ny eritreritrareo amin’izao fotoana izao, fa Andriamanitra mahalala ny eritreritrareo tsara, tsy misy miafina AMINY izany. Tahaka izany koa ny fisainantsika tsirairay avy.
Ary ny devoly koa mahita an’izany tsara :
izany eritreritrao zany marina!
izany fijery ity kristiana ity izany,
Fantany tsara izany, fa mila ianao mandeha mahintsy tsara ao anatin’ny fonao sy ny fisainanao ao.
Mivoaka ho azy amin’izay ny Teny hoe: Andriamanitra no hanamarina ny teniny ao anatinao ao .
Androany, ry havana, ny zavatra mba tiako hataonao dia hoe manana safidy ianao .
- tsy mandray ny Fanahy Masina, tsy manintsy mandray an’i JESOSY aloha ianao .
Tena betsaka mihintsy ny olona mivavaka fa tsy nandray an’i Jesosy mihintsy.
Ohatra ny isan’andro izany, efa ho 10 taona nivavaka fa tsy nandray an’i Jesosy, tonga amin’ilay hoe mora ny mijery an’izy ireny satria misy « symptôme spirituel » ; izaho efa tena mpino ka, izaho efa tena « converti(e) » ; nefa ny « symptôme » manambara fa tsy nandray an’i Jesosy mihintsy izy.
Diniho tsara io Jesosy io, ry havana, fa tsy vitan’ny fihetsiketsehana, na tsy vitan’ny fomba ivelany io, fa fiainana anaty ao.
- Raha tena nandray an’io JESOSY io ianao dia tsy maintsy maneho ny toetran’ny FANAHY MASINA .
Miala ny fankahalana, ny avonavona, ny fihatsarambelatsihy, ny fitiavanao ota, miala daholo izany. Mandiniha tena, ry havana, mba tsy ho diso fanantenana.
- tsy maintsy manandratra an’i Jesosy ianao, amin’izay zavatra rehetra atao ,
omeo voninahitra foana Andriamanitra , omeo voninahitra JESOSY, ataovy « 2ème plan » daholo ny zavatra rehetra.
Omeo voninahitra ny Tompo amin’ny fitondran-tenanao, amin’ny volanao, amin’ny herinao, avelao aty aoriana daholo ny zavatra rehetra. Ary izany no tadiavin’ Andriamanitra , izay manome voninahitra AHY hoy IZY dia omeko voninahitra.
Ny an’i Elia, ry havana, matoa izy sahy nanao ity “défi” ity, dia satria fantany tsara ilay Andriamanitra ivavahany.
Matoa i Paoly sahy niteny nanao hoe : “fa tsy menatra ny filazantsara aho” satria fantany tsara io JESOSY izay inoany io.
Io Jesosy io, ry havana, dia mahay manangana ny maty fa aza matahotra ianao; mahay mampisy ny zavatra misy ao amin’ny tsy misy.
Mamerina mamaky baiboly kely aho ry havana dia nijery ny ranomasina mena, tsy fantatro hoe firy « mètre de profondeur » io ranomasina io ; Lasa rindrina hoy izy, lasa rindrina ny rano, nijery an’io aho, nody indray ny heriko ato anatiko hoe hay ve ianao JESOSY Ianao ilay miaraka amiko ity e ?
Izany no Andriamanitra izay ivavahantsika, raha tokony ho tapitra aza ny androm-piainanao, ry havana, mbola hain’ny Tompo no mamelona anao fa aza matahotra.
Na dia efa tokony hoe tsy misy fanantenana intsony aza izao tontolo izao ; mbola misy fanantenana ao amin’ Andriamanitra.
“Fantatro izay inoako” hoy i Paoly, ary tahaka izany koa i Elia, matoa izy tena sahy hoe ianareo 550 reto misehoa eto anatrehako ianareo, tsy misy lanjany ianareo eo anatrehako; nefa tena ombiasy tena gaigy lahy daholo, mijoroa ianareo ! Fantatro izay inoako hoy i Paoly.
Ary ianao androany, mba fantatrao ve izay inoanao ?
Mila olona Andriamanitra, efa vanin’andro tokony hampisehoany ny heriny izao,
- tsy tokony hatahotra intsony isika,
- tsy tokony hangovitra intsony isika
na inona na inona miseho eo amin’izao tontolo izao.
Na manao ahoana na manao ahoana fahasahiranana,
- VELONA NY TOMPONTSIKA, ry havana.
Aza manamarin-tena ianao ry havana, maneke , fa misy zavatra tsy mety ao aminao :
matoa ianao mbola osaosa,
matoa ianao mbola misy tahotra,
ary androany maneke fa mila an’i Jesosy ianao, ary mila Azy hanapaka tanteraka ny fiainanao,
Aza atao kitoatoa ny fandraisana an’i JESOSY fa ho very ianao , ary tsy ho tantinao ny aorian’ny fahafatesana, hidradradradra ianao hoe tahak’izay ihany aho mba nino, tahak’izay ihany aho mba nanapa-kevitra.
Fa anio mbola misy ny fotoana , mitenena , mialà amin’ny hevitrao,
Isaia 55:7 « Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, Eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy. »
Aoka hiala amin’ny heviny, aoka hiala amin’ny làlany, aoka hiala amin’ny zay noheverinao hatramin’izay fa niankinanao; fa androany miverena, manomboka androany JESOSY hoe IANAO mihintsy no tiako hitondra ny fiainako manontolo.
Vao tsy ela akory, nifamaly izy mianaka, mbola tanora dia tanora avy dia tapaka lalan-drà ny reniny.
Aza mirehareha hoe mbola matanjaka androany ; fa anio no andro fankasitrahana, anio no androm-pamonjena.
Ary rehefa tafiditra ao anatinao JESOSY dia mitenena amin’izay hoe « MANOMBOKA ANDROANY TOMPO ô ASEHOKO NY HERINAO, ASEHOKO NY VONINAHITRAO, satria tsy izaho no manantanteraka izany, tsy amin-kery na fahatanjahana, fa amin’ny Fanahin’i JEHOVAH Tompon’ny maro.
Tena mivavaha amin’ny fonao mihitsy, aza atao vavaka maivamaivana fa tena ataovy anatin’ny hetahetanao mihitsy JESOSY manomboka androany, tena mila ahy IANAO, ary androany izaho Jesosy dia vonona mihintsy.
Mitady olona Andriamanitra, izaho Jesosy anisany, mila Elia be dia be ny firenentsika, ho sahy, hoy izy Andriamanitra mamaly amin’ny vavaka, mila Elia betsaka handeha amin’ny fahamasinana fa tsy amin’ny fahagagana fotsiny fa andeha amin’ny fahadiovan-pitondran-tena, handeha amin’ny fahamarinana, mila olona Andriamanitra izaho sy ianao, izany no ilainy androany.
Mitenena : “ ity aho Jesosy ô! Sahy aho manomboka androany ampiseho ny Voninahitrao amin’ny androm-piainako fa hanao fahagagana amin’ny fiainanao izy, mandehana tsara amin’ny fahadiovana, fahamasinana.
Mety anaty aretina na fahasahiranana ianao androany, maneke azy, fa handresy lahatra ny manodidina anao Andriamanitra noho ny amin’ny fahagagana izay ataony aminao, fitondran-tena aloha; aoka ho mendrika ny filazan-tsara ianao.